Raha tampoka ilay zaza dia mamerina ny silabola tampoka, manenina ny teny, manala baraka azy sy maneso, dia tezitra ireo ray aman-dreny, satria tsy azon'izy ireo tsara ny teny avy amin'ny kabary. Eny, ary ny zaza dia mamela minitra vetivety be dia be, mihidy ao anatiny izy ary mandà tsy hiresaka amin'ny ankapobeny. Ary avy eo ny ray aman-dreny dia manomboka mieritreritra ny fomba hanavotana ilay zaza tsy ho maimaika.
Inona no manakenda?
Ny fanakorontanana dia fanitsakitsahana ny fahamoram-po, ny haavon'ny feon'ny fieritreretana, ary ny famerimberenana, ny fisalasalana ary ny fitomboan'ny feo sy ny silamo dia mitranga noho ny aretin-kozatry ny fitaovam-pitenenana. Zava-dehibe ny manavaka avy hatrany ny endriky ny hatairana amin'ny soritr'aretin'ny ankizy, amin'ny fotoana handraisana dokotera:
fisalasalana mialoha ny fanombohan'ny kabary;
Atsaharo eo afovoan'ilay fehezanteny.
Fihetseham-po amin'ny ankizy: antony
Ny fanebahana amin'ny zaza dia miseho noho ny antony maromaro. Indraindray io hadisoam-pitenenana io dia avy amin'ny aretina mifindra amin'ny aretina - ohatra, ny tazo maitso, gripa, kohaka, kanseran'ny neurolojia mandritra ny trauma. Matetika, ny antony mampihetsi-po amin'ny ankizy dia ny fanesoesoana ara-psikolojika, ohatra, taorian'ny fahaverezan'ny havan-tiana, noho ny tahotra ny haizina, ny fanirery. Matetika ny ray aman-dreny tsy mifantoka amin'ny fahamarinan'ny kabarin'ny ankizy, ny henjana amin'ny fanabeazana, ary ny fanaovana kopia ny kabarin'ny olona mihetsiketsika be hatezerana matetika dia miteraka fikomiana.
Ahoana no hikarakarana ny fon'ny ankizy?
Amin'ny fikarakarana io hadisoam-pitenenana io, tsy tokony hiantehitra amin'ny zava-misy ianao fa handalo fotsiny. Mila fanampiana manokana - mpitsabo arifomba. Anontanio ny dokotera fa tokony haingana araka izay azo atao, satria miankina amin'ny fahombiazan'ny fitsaboana iray manontolo. Amin'ny fandraisana ilay mpitsabo dia hametraka fanontaniana momba ny zavatra manokana amin'ny fampandrosoana ny kabarin'ny ankizy ny mpandinika lahateny iray, alefaso amin'ny fikarohana amin'ny neurologista izy mba hanaisotra ny endriky ny neurologique amin'ny fanosihosena na amin'ny psikology.
Ny fomba fiasa iray tafiditra dia manan-danja amin'ny fomba fampandroana zaza tsy hiraharaha. Noho izany, ohatra, amin'ny fitsaboana fanafody amin'ny zaza, ny neuropathologist dia nomena fanafody mahasalama mba hanamaivana ny tsiron'ny fitaovana miteny, ary koa ireo mpitsabo izay misy fiantraikany ratsy eo amin'ny psyche.
Ny lahatenin'ny mpitsabo dia hitarika kilasy, vondrona ary olona. Mba hanitsiana ny fikorontanana amin'ny ankizy, dia zava-dehibe ny fihazakazakan'ny gymnastics, mba hampatanjaka ny diaprafy, ary hitombo ny tadim-peo. Ilay mpampianatra koa dia hampianatra ilay ankizy ny fitenenana marina sy mazava tsara ny feo, ny teny malefaka sy ny fanehoan-kevitra, ny fifehezana ny faharetany sy ny rhythm.
Ao amin'ny fitsaboana, dia zava-dehibe ny mitadidy ireo toetra ara-psikolojian'ny ankizy manakivy. Ny mpitsabo saina dia handray anjara amin'ny fanatsarana ny psyche ny zaza, manampy amin'ny fandresena ny fahatsapana tahotra, ny fahaketrahana, ny fikolokoloana ary ny tsy fahampian-tsakafo noho ny fahadisoana miteny, ny fananana fiheveran-tena. Amin'ny ankapobeny, ny dokotera dia mitarika kilasy mampiasa lalao, fitaovana fampianarana, mozika. Ao amin'ny fitondrana ny tanora, ampiasaina ny hypnosis sy ny teknikan'ny autosuggestion.
Ny fomba fitsaboana ny fikomiana amin'ny ankizy dia ny fanasitranana ny teboka, izay manampy amin'ny fanamafisana ny fitsipi-pitenenana mahatsiravina. Misy programa manokana momba ny ordinatera koa. Ny ankizy dia manazava teny sy andian-teny ao amin'ny mikrô, ary mamerina ny tsimok'aretina tsikelikely sy tsotsotra amin'ny fahavoazana faharoa. Noho izany dia manitsy ny firaketana ny ordinatera ny crumb ary mihatsara ny lahateniny.
Tsy misy andraikitra mavesatra loatra amin'ny fitsaboana ny fikomiana ao amin'ny zanaka dia omena ny ray aman-dreny izay tsy maintsy mamorona tontolo iainana tsara ao an-trano izay hahatsapa ny fahatokisan-tena sy ny tony ny zaza malala. Tokony hanaraka ny kabarin'ny zaza ny ray aman-dreny, hanitsy azy tsara ary hifehy ny azy.
Mampisehoa ny lohataona amin'ny ankizy ao anaty dingana
Lahatsoratra misy volom-borona vita amin'ny taratasy
Ny asa tanana ho an'ny ankizy amin'ny 9 May amin'ny tanany manokana
Very ny zaza - mandray ny tanantsika isika ary mandray andraikitra!
Ahoana ny fomba hananganana indray?
Fihetseham-po eo amin'ny lahy sy vavy
Ahoana ny fomba hampianarana ankizy iray hanoratra tarehimarika?
Ny fisehoan'ny fiction ao amin'ny MYTH
Aiza ny mandeha miaraka amin'ny zaza mba hialana amin'ny lohataona?
Ny zanakavavin'i Johnny Depp
Ny fanekena ny zaza ao amin'ny kindergarten - toro-hevitra amin'ny ray aman-dreny
Apetaka maina - tsara sy ratsy
Ny sary eo amin'ny sehatry ny tovovavy - ireo fitsipika fototra mifantina ny lokony ho an'ny famolavolana fahombiazana
Anti-cellulite fampakaram-bady - ireo fomba 5 tsara indrindra hanesorana ny "orana karaoty"
Mampidi-doza ve ny misotro rano be?
Carrot "Ny Mpanjakavavin'ny Herinandro"
Salady misy voankazo sausage
Benefits amin'ny voankazo bolgara
Traneksam miaraka amin'ny ra mandriaka
Ny teheonan'ny onion dia tsara sy ratsy
Akanjo fidiovana Ekko
Fanamboarana seza ambony ho an'ny sakafo
Ny lehilahy dia mitovy amin'ny taona rehetra: 30 porofo tena mampihomehy tokoa!
Emilio Pucci's perfume
Mitantara ny "Crown of Love" i fortune